I-CMOAPI ngumenzi wamachiza wokubonelela ngekhwalithi ephezulu yeCetilistat powder kunye ne-Orlistat ePhakathi, umthamo wenyanga unokufikelela kwi-3100kg, kwaye ungumnikazi wenkqubo yokulawula umgangatho obanzi (ISO19001) kunye nenkqubo yolawulo lwendalo (14001)
Cela iQuote eKhawulezayo
Thenga iiMveliso zokuLahla ubunzima
Kuphi ukuthenga iLorcaserin kunye nabaPhakathi bayo?
Unokwenza iipilisi zokulahleka kobunzima zithenge kwiivenkile ezikwi-intanethi. Xa injongo yakho kukuphulukana neeponti ezingaphezulu ngenxa yokutyeba kakhulu, ungajonga iipilisi zokulahleka kobunzima （Orlistat / Cetilistat - ezithengiswa kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, unokufuna amayeza ngenxa yesikhokelo esingqongqo yi-FDA.
Ukuba ujonga iipilisi zokunciphisa umzimba, kuya kufuneka ujonge kwi-CMOAPI ngonikezelo olusebenzayo lweemveliso ezinyulu. Amakhompawundi ethu afumene isiqinisekiso somgangatho.
Ngaba i-orlistat iyasebenza ukuba awutyi mafutha?
Ukuba akukho mafutha kwesinye sezidlo zakho, okanye ukuba uphoswa sisidlo, akukho mfuneko yokuba uthathe idosi ye-orlistat.
Zingaphi i-orlistat endizithathayo ngosuku?
I-Orlistat ihlala ithathwa ngamaxesha e-3 ngemini ngesidlo ngasinye esisisiseko esineenqatha (akukho ngaphezulu kwe-30% yeekhalori zesidlo). Ungalithatha iyeza kunye nokutya kwakho okanye ukuya kuthi ga kwiyure enye emva kokutya.
Ngaba unokuhambisa amanqatha xa usitya i-Orlistat?
I-Orlistat inqanda umsebenzi we-lipase. Xa uthatha iyeza kunye nokutya, malunga neepesenti ezingama-25 zamafutha owasebenzisayo awaphukanga kwaye ayapheliswa ngokuhamba kwamathumbu.
Ngaba i-orlistat ineziphumo ebezingalindelekanga?
Iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo ezichazwe kwi-orlistat zibandakanya: ukungxamiseka kwamathumbu, ukuhamba rhoqo kwamathumbu, ukukhutshwa ngeoyile, ukuvuza okunamafutha, i-steatorrhea, kunye ne-flatulence ngokuphuma.
Ungathatha i-2 orlistat ngaxeshanye?
I-Orlistat isebenza kuphela xa kukho amafutha kwinto oyityayo, ke ukuba uphoswa sisidlo okanye ukuba utya isidlo esingenamafutha ke musa ukuthatha idosi ye-orlistat. Ukuba ulibale ukuthatha idosi, ungakhathazeki; thatha nje iphilisi nokutya kwakho okulandelayo njengesiqhelo. Musa ukuthatha amanani amabini kunye ukwenza idosi ekhohliweyo.
Yeyiphi i-orlistat okanye iXenical engcono?
Umahluko phakathi kwe-orlistat kunye ne-Xenical kukuba i-orlistat yinguqulelo yesiqhelo yeyeza, ngelixa i-Xenical ibizwa ngegama. Oko kuthetha ukuba iXenical ibiza kakhulu kune-Orlistat kwaye yaziwa ngcono njengethebhulethi yokulahleka kobunzima. I-Xenical kufuneka ithathwe ngendlela efanayo ne-orlistat.
Ngaba ungasela kwi-orlistat?
I-Orlistat ayinxibelelani notywala, ke kukhuselekile ukusela utywala ngelixa uthatha i-Orlistat. Nangona kunjalo, utywala buninzi kwiikhalori. Ngenxa yoko, ukusela utywala ngelixa uthatha i-Orlistat kunokuthintela uhambo lwakho lokulahleka kobunzima. Ukufumana ezinye iingcebiso malunga nendlela yokwenza i-Orlistat isebenzise ngakumbi ukutya kwethu kwe-Orlistat
Ngaba i-orlistat ichaphazela ukuzala?
Kwiqela le-orlistat, ukuphucuka okuphawulekayo kwabonwa kwiprofayili ye-lipid ekupheleni kweenyanga ze-3. Amaxabiso okuqonda ayengama-40% kunye ne-16.7% kunye ne-3.3% kwi-orlistat, iqela le-metformin kunye neqela lolawulo ngokulandelelana (P-0.003). Ukwehla kobunzima kwafunyaniswa ukuba yeyona nto ibalaseleyo yokuqokelela i-ovulation ngovakalelo ngobuntununtunu obufanelekileyo.
Ngaba ndingathatha i-orlistat kube kanye ngosuku?
Idosi eqhelekileyo yenye philisi enye - 120 mg, kathathu ngemini ngesidlo ngasinye. Nangona kunjalo, awunyanzelekanga ukuba uthathe elinye ukuba akukho mafutha kwisidlo okanye ukuba uphoswa sisidlo.
Ngaba i-orlistat ibangela ukonakala kwesibindi?
U-Alli unxulunyaniswe nokwenzakala okuqatha esibindini kwiimeko ezinqabileyo, nangona ikhe yenzeka kakhulu kwabo bathatha idosi yamandla kagqirha (Xenical). Yeka ukuthatha u-Alli kwaye ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba uphuhlisa nayiphi na le miqondiso yomonakalo wesibindi.
Ngaba i-orlistat inyusa uxinzelelo lwegazi?
I-Orlistat ikhuthaza ukulahleka kwesisindo esibalulekileyo eklinikhi okunxulunyaniswa nokuncitshiswa okubonakalayo koxinzelelo lwegazi kunye nenqanaba lentliziyo, kwaye ke kunokuba nendima kulawulo lwexinzelelo lwegazi kwizigulana ezityebe kakhulu nezityebileyo.
Ngaba i-orlistat ingabangela iingxaki zezintso?
I-Orlistat sisithintelo sepaseyisi esiswini kunye nepancreatic kunye nokusebenza okuqinisekileyo kokunyusa kunye nokugcina ukunciphisa umzimba. Nangona ukusetyenziswa kwayo kuthintelwe ziingxaki ezinobunzima kodwa ezinobungozi besisu, kutsha nje kunxulunyaniswe nokulimala kwezintso (AKI).
Ngaba u-orlistat umlutha?
I-Orlistat yi-pancreatic lipase inhibitor kwaye inqanda ukufakwa kwamanqatha kwindawo yokugaya. Ngenxa yokuba ayichaphazeli inkqubo ye-nervous central, okanye i-orlistat ayinakho iipropati zokulutha.
Ngaba i-Orlistat FDA yamkelwe?
I-Xenical (orlistat 120mg) yamkelwa njengemveliso kagqirha yi-FDA ngo-1999 yolawulo lokutyeba ngokudibeneyo nokutya okuncitshisiweyo kwe-caloric, kunye nokunciphisa umngcipheko wokufumana kwakhona ubunzima emva kokuphulukana nobunzima ngaphambi komzimba.
Uyithatha njani i-orlistat 120 mg?
Umthamo oqhelekileyo we-Orlistat yenye ye-120 mg capsule ethathwe kwisinye sezidlo ezithathu eziphambili ngosuku. Ingathathwa kwangoko ngaphambi, ngexesha lesidlo okanye ukuya kuthi ga kwiyure enye emva kwesidlo. Le philisi kufuneka iginywe ngamanzi.
Ngaba i-orlistat inokubangela ukuba ufumane ubunzima?
Uninzi lokulahleka kobunzima ngenxa ye-Orlistat yenzeka kwiinyanga ezintandathu zokuqala zokuthatha amayeza. Ukuba uthatha isigqibo sokuyeka ukusebenzisa i-Orlistat yokunciphisa umzimba, kuya kufuneka uqhubeke nokutya okunempilo kunye nokuzilolonga rhoqo. Nangona kunjalo, unokufumana ubunzima emva koku.
Ukhawuleza kangakanani ukunciphisa umzimba nge-orlistat?
I-Orlistat (igama lebrand: alli) lonyango oluvunyiweyo lwe-OTC olunokunceda abantu abadala abatyebe kakhulu. I-Orlistat isebenza ngokuthintela amanqatha ukuba angangeni emzimbeni emva kokuba ityiwe ngexesha lokutya. Phantse i-5 ukuya kwi-10 yeepawundi inokulahleka ngexesha lokuqala kwiinyanga ezi-6 zokusetyenziswa kwe-orlistat.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba i-alli iqale ukusebenza?
Kwangoko emva kokuba ndithathe ii-capsules ze-alli® kufuneka ndilindele ukubona iziphumo? Ukuba ulandela ikhalori eyancitshisiweyo, ukutya okunamafutha asezantsi, yenza umthambo rhoqo, kwaye uthathe ii-alli® capsules njengoko kuyalelwe, unokubona iziphumo kwiiveki ezimbini zokuqala. Uninzi lokwehla kobunzima kuhlala kwenzeka kwiinyanga ezintandathu zokuqala.
Ngaba i-orlistat ithintela ukutya?
I-Orlistat (Xenical) sisiyobisi esichazwe nguGqirha wakho. Kuye kwaveliswa ukunceda ukunciphisa umzimba. Izifundo zibonise ukuba ngokusebenzisa i-Orlistat, kunye nokutya okunempilo kunye nokuzilolonga, kukho ukonyuka kwesisindo. Ayithathi indawo yokutya okanye imithambo kwaye ayikuthinteli ukutya kwakho.
Ngaba i-orlistat iyasebenza?
Izifundo zibonise ukuba, kwi-avareji, i-orlistat, kunye nokunciphisa ubunzima bokutya kunye nokuzilolonga, kubangela ukwehla kobunzima ngaphezulu kokutya okunciphisa ubunzima kunye nokuzilolonga kuphela. Abanye abantu baphulukana ne-10% okanye nangaphezulu kobunzima babo bomzimba kwisithuba seenyanga ezintandathu ngoncedo lwe-orlistat. Kweminye, ayisebenzi kangako.
Ngaba i-orlistat inokubangela i-pancreatitis?
Izigqibo Iingxelo zethu zibonisa ukuba i-orlistat inokubangela ukuba kubekho isifo sepancreatitis ebukhali kwizigulana ezithile. Kwizigulana ezibonisa iintlungu zesisu kwakamsinya emva kokuqalisa i-orlistat, ukuxilongwa kwepancreatitis kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Sikwacebisa ukuba kusetyenziswe ngononophelo i-orlistat kwizigulana ezisengozini yokwenzakala kwepancreatic.
Leliphi elona xesha lilungileyo lokuthatha i-orlistat?
I-Orlistat iza njenge-capsule kunye ne-capsule engabhalwanga ukuba ithathe ngomlomo. Ihlala ithathwa kathathu ngemini ngesidlo ngasinye esiphambili esinamafutha. Thatha i-orlistat ngexesha lokutya okanye ukuya kuthi ga kwiyure eli-1 emva kwesidlo. Ukuba ukutya kuphosiwe okanye akunamafutha, ungatsiba idosi yakho.
Ubungakanani obungabunciphisa ngenyanga ukuba utyebe kakhulu?
Oko kuthetha ukuba, ngokomndilili, ojolise kwi-4 ukuya kwi-8 yeepawundi zokunciphisa umzimba ngenyanga yinjongo esempilweni. Kungenxa yokuba kunokwenzeka ukuba ulahlekelwe kakhulu, ubuncinci kwiinyanga zokuqala zokutya, oko akuthethi ukuba kuphilile okanye ukuba ubunzima buya kuhlala bude ixesha elide.
Kutheni i-oyile ye-poop yeoyile xa uthatha i-Orlistat?
Njengokuba i-oyile incinci kunamanzi, le ntshukumo iya kuvela kwindlu yangasese njengeoyile yeorenji ehleli ngaphezulu kwamanzi. Abanye abantu banokuchaza ivumba le-keriorrhea njengaleyo yeoyile eyomeleleyo. Ngamanye amaxesha, umntu unokuhambisa ilindle ecaleni kweoyile.
I-Cetilistat, ekwabizwa ngokuba ngamagama e-Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat sisiyobisi esitsha sokunciphisa umzimba.
Kutheni sifuna iCetilistat?
ukutyeba kakhulu sesona sifo sixhaphakileyo sesondlo kwihlabathi liphela. Wonke umntu unokungaboni iziphumo ngokwenza umthambo kunye nokutya okucocekileyo; kungoko unokufuna ukusebenzisa iCetilistat ukulwa nokutyeba.
Isebenza njani iCetilistat?
I-Cetilistat isebenza ngokuthintela ukonakala kunye nokufunxwa kwamafutha. Oku ikwenza ngokuthintela ukuyilwa kwepancreatic lipase, umsebenzi wayo kukophula i-triglycerides emathunjini. Emva kokuba i-triglycerides ingenakuncitshiswa njengamafutha e-asidi emzimbeni, iyaphuma. Ngenxa yoko, kuncitshisiwe ukungenisa amandla okukhokelela ekwehliseni ubunzima.
Izibonelelo zeCetilistat kunye neLightisindo
1. Kukunceda ukunciphisa umzimba ukugcina indlela yokuphila esempilweni, ukukunceda ekugcineni i-BMI esempilweni.
I-2 ibonelela ngeziphumo ngexesha elifutshane, i-Cetilistat ikunika umzimba we-bikini kwiiveki ezilishumi elinambini.
Uyisebenzisa njani iCetilistat
Ngokwesiqhelo, i-Cetilistat powder ithengiswa ngohlobo lwee-60mg zeepilisi ezithathwa ngomlomo. Abanye abantu baya kukhetha ukuyithatha emva kwexesha lesidlo, kodwa akufuneki udlule ngaphezulu kweyure emva kwexesha lesidlo.
Ngaba iCetilistat iyasebenza?
I-Cetilistat ikwasisiyobisi sethutyana kwaye isenokungabi yeyona ilungileyo ukulawula ubunzima ebomini bakho bonke. Kwimeko apho isetyenziselwa ixesha elide kakhulu, inokukhokelela ekubeni likhoboka kunye nemicimbi yesisu.
I-Cetilistat, nangona kunjalo, ibonwa inyamezelwa ngendlela engcono xa kuthelekiswa nezinye iziyobisi ezilahlekayo njenge-Orlistat.
Ngubani onokuyisebenzisa iCetilistat?
IBII yakho ingaphezulu kwama-27, kwaye uneengxaki zempilo ezinxulumene nokukhuluphala njengoxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye neswekile.
Iimpembelelo zeCapetilist Side Effects
Uninzi lweziphumo ebezingalindelekanga zeCetilistat yi-gastro kunye nokugaya ukutya okunxulumene noko.
Ukuncitshiswa kumanqanaba e-vitamin E kunye no-D, ukungasebenzi kakuhle kwe-Fecal, ukungxamiseka kwe-defecation, ukukhutshwa kwe-Rectal, i-Fatty stools, i-oily stools ect.
Kwenzeka ntoni ukuba uMiss Dose weCetilistat?
Ukuba uphuthelwe idosi, zimbini izinto omele uziqwalasele; ufike nini kwaye nini ishedyuli yakho elandelayo. Kwimeko apho ukhumbule ukuba uphoswe yidosi, yithathe ngokukhawuleza emva kokuba uqaphele.
Ukuba ishedyuli yakho elandelayo isondele kakhulu ,tsiba idosi yeCetilistat ephosiweyo kwaye uphinde uqalise kwishedyuli yakho yesiqhelo yokujonga idosi. Ungaze usebenzise idosi eyongezelelweyo ukwenza idosi ephosakeleyo, kuba oku kuya kukhokelela kwi-overdose. Ukuba uziva ufuna ukukhumbula xa uza kuthatha iziyobisi uba ngumsebenzi, ungaseta isivusi okanye ucele omnye wabahlobo bakho okanye amalungu osapho ukuba akukhumbuze.
yintoni umahluko cetilistat kunye ne-orlistat？
Unyango lwe-orlistat lukwanxulunyaniswa nenani leziganeko ezigwenxa zesisu (ii-AEs) ezibaxekileyo phakathi kwezigulana ezingahambelaniyo nokutya okune-fat. I-Cetilistat sisithinteli sepancreatic lipases, kunye ne-lipases zesisu, kwaye iyahluka ngokwamachiza kwi-orlistat.